APE - စာရေးသူ၊ ထုတ်ဝေသူ၊ လုပ်ငန်းရှင် Martech Zone
Guy Kawasaki နှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်အနေဖြင့်မိတ္တူတစ်စောင်ဝယ်ယူခဲ့သည် APE - စာအုပ်တစ်အုပ်ထုတ်ဝေရန်အတွက်စာရေးသူ၊ ထုတ်ဝေသူ၊.
ငါ Guy Kawasaki ရဲ့စာအုပ်အများစုကိုဖတ်ပြီးအတော်လေးကြာခဲ့ပါပြီ (သူကကျွန်တော့်ကိုပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အင်တာဗျူးခဲ့တာပေါ့။ ရယ်စရာဇာတ်လမ်းပါ!) ။ ဤစာအုပ်သည်အတော်လေးကွဲပြားခြားနားပါသည်။ သို့သော်၎င်းသည်သင်၏ ebook ကိုမည်သို့ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရန်အသေးစိတ်အသေးစိတ်လမ်းညွှန်စာအုပ်ဖြစ်သည်။
စာရေးဆရာများ Guy Kawasaki နှင့် Shawn Welch တို့စတင်ခဲ့သည် APE: စာရေးသူ၊ ထုတ်ဝေသူ၊ ဂေး၏နောက်ဆုံးထုတ်ဝေမှုကိုကုမ္ပဏီမှအစုလိုက်အပြုံလိုက်ဝယ်ယူမှုဖြင့်အီလက်ထရောနစ်နည်းဖြင့်ဖြန့်ဝေခဲ့ခြင်းအပေါ်စိတ်ပျက်ခဲ့သည့်အဖြစ်မှန်နှင့်အတူ။ ထို့နောက်စာအုပ်သည် ebooks များ၏စိန်ခေါ်မှုများကိုဖြတ်သန်းသွားသည်။ ပုံစံများမှသည်ကိရိယာများအထိဖြန့်ဖြူးခြင်းအထိဖြစ်သည်။ သင်ထင်သည်ထက် ပို၍ ခက်ခဲသည် (ဤစာအုပ်အထိ!) ။
ဤစာအုပ်တွင်သင်၏ ebook ဖန်တီးခြင်းအတွက်သက်သေပြနိုင်သောနည်းလမ်းများ၊ အသုံးပြုရန်အတွက်အသုံးပြုသည့်ကိရိယာများမျက်နှာပြင်များ၊ အသုံးပြုရန်ဆိုဒ်များနှင့်စျေးကွက်သို့ထွက်ရန်အထိအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။ ငါအသေးစိတ်အားလုံးအံ့သြသွားတယ်။ ၎င်းသည်မည်သူမဆိုကိုယ်တိုင်ထုတ်ဝေရန်အတွက်တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်လမ်းညွှန်လမ်းညွှန်ဖြစ်သည်။
ငါအရမ်းစွဲလန်းသွားတယ်၊ နောက် ၃ အုပ်ကိုငါဝယ်ပြီးဖြန့်ခဲ့တယ် Jenn နှင့် မာတီ ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းနှင့်အတူကူညီပေးနေမည်သူကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဇိုင်နာနေသန်, တစ်လျှောက်လုံးတစ်လျှောက်လုံးသူတို့၏ကိုယ်ပိုင်စာအုပ်များကိုလုပ်ဆောင်နေကြသည်။
Jim Kukral ကိုလူတွေ့မေးမြန်းသောအခါကိုယ်တိုင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရန်အခွင့်အလမ်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ပထမဆုံးသဘောကျခဲ့သည်။ ဂျင်မ်က ebooks ၀ ယ်လိုအားကွေးကွေးသည် ebooks များ၏ထုတ်ကုန်များထက်များစွာပိုမိုမြန်ဆန်စွာတက်နေသည်ဟုထောက်ပြသည်။ ဤသည်မှာတစ် ဦး ချင်းစီသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက် ebook တစ်ခုထုတ်ဝေခြင်းဖြင့်ယုံကြည်ကိုးစားမှုနှင့်အခွင့်အာဏာကိုတည်ဆောက်ရန်မယုံနိုင်စရာအချိန်ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင့်မှာထူးခြားတဲ့ပြောစရာတစ်ခုရှိတယ်ဆိုရင် ... ဒါကခင်ဗျားကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရန်သင့်အခွင့်အရေးပါ။
Tags: ပျားစာရေးသူE-စာအုပ်ebookကန်ထရိုက်တာGuy Kawasakiပုံနှိပ်ထုတ်ဝေပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသူSelf-ထုတ်ဝေရန်
Microsoft မှ Big Data Insights
14:2013 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 10, 44
သူသည် စာအုပ်ထဲတွင် သရဲစာရေးခြင်းသို့ ရောက်ပါသလား။ စာရေးရန် အချိန်မရှိသူများ (သို့မဟုတ် အရည်အချင်းရှိသူများ) အတွက် သူ့တွင် အစီအစဉ်ရှိပါသလား။
14:2013 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 3, 24 တွင်
မင်္ဂလာပါ @daveyoung:disqus စာအုပ်ထဲမှာ ရေးထားတဲ့ အကြံဥာဏ်တွေရှိတယ်။ Guy က မင်းမှာ အချိန်မရှိရင် အရည်အချင်းမရှိရင် တွဲဖက်စာရေးဆရာတစ်ယောက်ဟာ ကောင်းမွန်တဲ့ ခြေလှမ်းတစ်ခုလို့ မင်းကို ပထမဆုံးပြောဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ ကျွန်တော့်စာအုပ်မှာ တွဲဖက်စာရေးဆရာတစ်ယောက်ရှိခဲ့ပြီး သူမဟာ အရာအားလုံးကို ပိုမိုလွယ်ကူအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါတယ်… အခြေခံအားဖြင့်တော့ စာအုပ်က ကျွန်တော့်ရဲ့ အတွေးအမြင်ဖြစ်ပေမယ့် Chantelle က သူတို့ကို စုစည်းပြီး ပရောဂျက်ကို ပစ်မှတ်ထားခဲ့တာပါ။